China Plastic Inaliti zomngundo yoMvelisi kunye noMthengisi | Mestech
Inaliti zeplastiki sisixhobo sokuvelisa iimveliso zeplastiki, ezisetyenziselwa ubukhulu becala kwimveliso yobuninzi. Inaliti nokuvunda unako ukunika isakhiwo epheleleyo kunye nobukhulu echanekileyo iimveliso zeplastiki lula yaye ngokukhawuleza.
Zithini izinto zokubumba zeplastiki
Inaliti zeplastiki(Inaliti nokuvunda) luhlobo izixhobo ukuvelisa iimveliso zeplastiki, kwaye kwakhona isixhobo ukunika iimveliso zeplastiki isakhiwo epheleleyo kunye nobukhulu echanekileyo. Inaliti yokubumba luhlobo lwenkqubo yokulungisa esetyenziselwa ukuveliswa kwamalungu athile antsonkothileyo. Ngokukodwa, iplastikhi enyibilikiswe bubushushu ifakwe kwilungu lembumbulu ngomatshini wokubumba phantsi koxinzelelo oluphezulu, emva koko ipholile kwaye yomelele ukufumana iimveliso ezibunjiweyo.
Iimpawu ngenaliti ngumngundo
1.Ukufakwa kwenaliti kunokwenza iindawo zeplastiki ezinesakhiwo esimbaxa, ubungakanani obuchanekileyo kunye nomgangatho wangaphakathi olungileyo ngaxeshanye.
Nangona ulwakhiwo lwesikhunta seplastiki lunokwahluka kakhulu ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo kunye nokusebenza kweplastiki, imilo kunye nolwakhiwo lweemveliso zeplastiki kunye nohlobo lomatshini wenaliti, ulwakhiwo olusisiseko luyafana. Ukubumba ikakhulu iqulunqwe inkqubo ugalele, ubushushu elawula inkqubo, uyila iindawo kunye namacandelo noshowo. Inkqubo yokugalela kunye nokubumba iindawo eziyinxalenye yokudibana ngqo neeplastiki kunye notshintsho ngeplastikhi kunye neemveliso. Ngawona malungu antsonkothileyo kwaye anokutshintsha ekubumbeni kweplastiki, efuna ukugqitywa kokugqwesa nokusebenza ngokuchanekileyo.
Ukwakhiwa komngundo wenaliti
Ukubumba kwenaliti kwenziwa ngumba ojikelezayo kunye nokubumba okungagungqiyo. Ukubumbela okuhambayo kufakwe kwitemplate eshukumayo yomatshini wokubumba inaliti, kwaye ukungunda okulungisiweyo kufakwe kwi template esisigxina somatshini wokubumba. Ngexesha yokubumba ngenaliti, ukungunda okuhambisekayo kunye nokubumba okungagungqiyo kuvaliwe ukwenza inkqubo yokugalela kunye nomngundo. Xa kuvulwa ukungunda, ukungunda okususwayo kunye nokubumba okungagungqiyo kuyahlulwa kukhuphe iimveliso zeplastikhi. Ukwenzela ukunciphisa umthwalo onzima woyilo lokungunda kunye nokuvelisa, uninzi lweenaliti zokubumba zisebenzisa isiseko sokubumba esisemgangathweni.
Iindidi ngumngundo ngokusetyenziswa kweempawu
(1) Umngundo weembaleki ezishushu
Ngoncedo lwesixhobo sokufudumeza, iiplastikhi kwinkqubo yokugalela ayizukuqina kwaye ayizukutshatyalaliswa ngemveliso, yiyo loo nto ikwabizwa ngokuba kukufa okubalekayo. Izinto eziluncedo: 1) Akukho nkunkuma 2) inokunciphisa uxinzelelo lwenaliti, inokusebenzisa ukubumba okunemingxunya emininzi 3) inokunciphisa umjikelo wokubumba 4) ukuphucula umgangatho weemveliso ezifanelekileyo kwiimbaleki ezishushu zokubumba: 5) ubushushu beplastikhi bububanzi bubanzi. Inobushushu obufanelekileyo kubushushu obuphantsi kunye nokuzinza okuhle kobushushu kwiqondo eliphezulu. I-6) Inovakalelo kuxinzelelo kwaye ayihambi ngaphandle koxinzelelo, kodwa inokuhamba xa uxinzelelo lusetyenziswa. 7) Ubushushu obulungileyo obuthile, ukuze bupholise ngokukhawuleza ekufeni. Iiplastikhi ezifumanekayo kwiimbaleki ezishushu zi-PE, ABS, POM, PC, HIPS, PS. Zimbini iintlobo zeembaleki ezishushu eziqhelekileyo: 1) imowudi yembaleki yokufudumeza 2) imowudi yembaleki ye-adiabatic.
(2) ngumngundo ezinzima
Isitya sensimbi esisetyenziswe ekufeni kwangaphakathi kufuna unyango lobushushu emva kokuthenga, njengokucima kunye ne-carburizing, ukuhlangabezana neemfuno zokusetyenziswa. Olu hlobo sokubumba ngenaliti lubizwa ngokuba lukhuni. Umzekelo, ukufa okungaphakathi kwamkela i-H13 yentsimbi, i-420 yentsimbi kunye ne-S7 yentsimbi.
(3) ngumngundo Soft (ngezantsi 44HRC)
Isinyithi esisetyenziswe kwisikhunta sangaphakathi sinokuhlangabezana neemfuno zokusetyenziswa ngaphandle kwonyango lobushushu emva kokuthenga. Inaliti enjalo ibizwa ngokuba ngumngundo othambileyo. Ukuba ukufa okungaphakathi kwenziwa ngentsimbi ye-P20, intsimbi yexilongo, intsimbi ye-420, i-NAK80, i-aluminium kunye ne-beryllium copper.
(4) ngumngundo ziphene
Inwebu yokubumba yenaliti kabini kukungunda apho izinto ezimbini zeplastikhi zifakwe kumatshini wokubumba ofanayo kunye nokubumba kabini, kodwa imveliso ikhutshwa kube kanye. Ngokubanzi, le nkqubo yokubumba ikwabizwa ngokuba ngamacandelo amabini ekubumbeni ngenaliti, edla ngokugqitywa siseti yokubumba kwaye ifuna umatshini okhethekileyo wokudubula kabini
(5) Inaliti yokubumba nge-ukungunda umhombiso kunye nokubumba okungaphakathi
Ukufakwa kwenaliti yeplastikhi ngokuhlelwa ngenkqubo yokubamba
Iiplastikhi zeplastikhi zingahlulwa-hlulwa zibe ziindidi ezintathu ngokweendidi ezahlukeneyo zesango.
(1) Edge isango sokubumbela (iipleyiti ezimbini ukungunda): Imbaleki kunye nesango zonakalisiwe kunye nemveliso kumgca wokuzahlula. Uyilo lolona lulula, kulula ukuluqhuba, kwaye iindleko ziphantsi. Ke ngoko, abantu abaninzi basebenzisa inkqubo yemilomo emikhulu ukuze basebenze. Ubume beplastikhi yeplastiki yahlulwe yangamacandelo amabini: ukungunda okuguqukayo kunye nokubumba okungaguqukiyo. Inxalenye ehambisekayo yomatshini wenaliti yinxalenye ehambisekayo (ubukhulu becala icala lokukhutshwa), kunye nokungasebenzi kwisiphelo sokukhutshwa komatshini wenaliti kubizwa ngokuba ngumngundo wokulungisa. Ngenxa yokuba indawo esisigxina yomlomo omkhulu wokufa ihlala yenziwe ngamacwecwe esinyithi amabini, ikwabizwa ngokuba kukungunda kweepleyiti ezimbini. Ubumba lweplate ezimbini lolona lwakhiwo lulula lwesibumba esikhulu somlomo.
(2) Pin-point isango sokubumbela (ipleyiti ezintathu-ukungunda): imbaleki kunye nesango azikho kumgca wokuzahlula, ngokubanzi ngokuthe ngqo kwimveliso, ke kuyinkimbinkimbi ngakumbi ukuyila iqela lomgca wokulahla umlomo, kwaye kunzima ukuqhubekeka . Inkqubo yemilomo entle ikhethwe ngokubanzi ngokweemfuno zemveliso. Inxalenye esisigxina yomhlwa ocoliweyo we-molg ngokubanzi ubunjwe ngamacwecwe amathathu esinyithi, ke oko kukwabizwa ngokuba "kukungunda kwepleyiti ezintathu" kolu hlobo lokufa kwesakhiwo. Ukubumba iipleyiti ezintathu sesona sakhiwo silula sokubumbela somlomo ocolekileyo.
(3) imbaleki Hot umngundo: Ubume kolu hlobo die ngokusisiseko iyafana naleyo ngemilomo eyiyo. Umahluko omkhulu kukuba imbaleki ibekwe kwiipleyiti enye okanye ezingaphezulu ezishushu zembaleki kunye neeswekile ezishushu ezinobushushu obuqhelekileyo. Akukho zinto zibandayo ezonakalisayo kwaye imbaleki kunye nesango ngqo kwimveliso. Ke ngoko, imbaleki ayifuni ukonakaliswa. Le nkqubo ikwabizwa ngokuba yinkqubo yemilomo, engagcina izinto ezingasetyenziswanga kwaye iyasebenza. Kwimeko yezinto ezibiza kakhulu ezingafunekiyo kunye neemfuno eziphezulu zeemveliso, kunzima ukuyila kunye nenkqubo, kwaye iindleko zokufa kunye nokubumba kuphezulu. Inkqubo yembaleki eshushu, ekwabizwa ngokuba yinkqubo yembaleki eshushu, ikakhulu inemikhono yembaleki eshushu, ipleyiti yembaleki eshushu kunye nolawulo lobushushu kwibhokisi yombane. Inkqubo yethu yembaleki eshushu ineefom ezimbini: inqaku elinye imbaleki eshushu kunye nenqaku elinembaleki eshushu. Inqaku elinye isango elishushu kukufaka inaliti yeplastiki etyhidiweyo ngqo kwisisu ngomkhono owodwa oshushu wesango, ofanelekile kwisisu esinye kunye nokuvunda kwesango elinye; Isango elinamanqaku amaninzi kushushu ukwahlula izinto ezinyibilikisiweyo kwisebe ngalinye lobushushu beSango lobushushu ngesitya esitshisayo sesango kwaye emva koko ungene ngaphakathi. Kufanelekile ukuba umngxuma omnye, feed point ezininzi kunye multi-kwisisu
Ukusetyenziswa ngumngundo ziphene zeplastiki
Inaliti nokuvunda yinto ebalulekileyo inkqubo izixhobo imveliso yeemveliso ezahlukeneyo mveliso. Ngophuhliso olukhawulezayo lweshishini leplastiki kunye nokukhuthazwa kunye nokusetyenziswa kweemveliso zeplastiki kumacandelo amashishini afana nokuhamba ngenqwelomoya, i-aerospace, i-elektroniki, oomatshini, inqanawa kunye nemoto, iimfuno zeemveliso ekubunjweni zikwindawo ephezulu kwaye ephezulu. Indlela yoyilo lwesiko lokuyila ayikwazanga ukufikelela kwiimfuno zanamhlanje. Xa kuthelekiswa noyilo lwesiko lokungunda, itekhnoloji ye-CAE yokuncedisa ikhompyuter ineenzuzo ezinkulu ekuphuculeni imveliso, ukuqinisekisa umgangatho wemveliso, ukunciphisa iindleko kunye nokunciphisa amandla emisebenzi.
1. Iimveliso zombane kunye nonxibelelwano:
2. Izixhobo ze-ofisi;
3. Automobile abaza kuzisebenzisa;
4. Izixhobo zasendlini;
6. Ukhuseleko lwezonyango nokusingqongileyo;
7. Amaziko emizi-mveliso;
10. Izinto zokwakha, ikhitshi kunye nezixhobo zangasese kunye nezixhobo
UMestech ngumenzi wobuchule ozibandakanya ekuveliseni ngenaliti kunye nokuveliswa kwenaliti phantse iminyaka engama-20. Sineqela leenjineli ezibalaseleyo kunye namava atyebileyo okuvelisa. Sinako ukuyila nokuvelisa ezikumgangatho ophezulu ziphene zeplastiki ngumngundo kubathengi bethu. Inaliti yethu yokubumba igubungela umbane, umbane, izithuthi, ezonyango, ezothutho kunye nezixhobo zeshishini. Ukuba ufuna, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Egqithileyo Die ekubunjweni ngumngundo
Okulandelayo: Imbaleki eshushu eshushu